Ukukhonza UYehova Ngaphambi Kokuba Imihla Yentlekele Ifike | Funda
“Khumbula uMdali wakho Ozukileyo.”—INTSHU. 12:1.
AmaKristu anamava anokuwanceda njani lawo aselula?
Yiyiphi imizekelo eseBhayibhileni yokuya kukhonza kwezo ndawo zifuna abashumayeli abangakumbi nenokunceda amaKristu akhulileyo namhlanje?
Ziziphi iindlela ezintsha aye akhonza ngazo uThixo amanye amaKristu asele ekhulile?
1, 2. (a) Sisiphi isiluleko uSolomon awaphefumlelwa ukuba asibhalele ulutsha? (b) Kutheni esi siluleko sibangel’ umdla nakumaKristu asele efikile kwiminyaka eyi-50?
UKUMKANI USOLOMON waphefumlelwa ukuba ayale ulutsha ngala mazwi: “Khumbula uMdali wakho Ozukileyo ngemihla yobufana [okanye yobutsha] bakho, ngaphambi kokuba ifike imihla yentlekele.” Yimihla enjani “imihla yentlekele”? USolomon wasebenzisa izafobe, esizobela umfanekiso wentlungu eza nale mihla yentlekele yokwaluphala—ukungcangcazela kwezandla, ukubhetyezela kwemilenze, ukuphelelwa ngamazinyo, urhatyazo lwamehlo, nokuba buthuntu kweendlebe, izimvi nokukhokhoba. Asimele silinde de saluphale ngaphambi kokuba sikhonze uYehova.—Funda iNtshumayeli 12:1-5.
2 Maninzi amaKristu aseyimiqabaqaba nakuba sele eneminyaka eyi-50 nangaphezulu. Asenokuba sele exubile entloko, kodwa akakabi nazo ezi ngxaki zempilo zichazwa nguSolomon. Ngaba ikho into enokuzuzwa ngala maKristu kwesi siluleko siphefumlelweyo sasibhekiswa kulutsha sisithi: “Khumbula uMdali wakho Ozukileyo”? Yintoni kanye ethethwa sesi siluleko?
3. Kuquka ntoni ukukhumbula uMdali wethu Ozukileyo?
3 Nakuba sisenokuba sele sineminyaka sikhonza uYehova, iya kuba ntle into yokuba simane sisithi xha sicingisise ngendlela azuke ngayo uMdali wethu. Ngaba ayisishiyi sibambe ongezantsi indalo yakhe? Abantu abakwazi kukuqonda tu ukuntsonkotha kwendlela eyilwe ngayo. Izinto asilungiselele zona uYehova zininzi kangangokuba asinakuyiswela indlela yokuzonwabisa. Xa sicingisisa ngendalo kaYehova, sitsho siluqonde ngakumbi uthando, ubulumko namandla akhe. (INdu. 143:5) Noko ke, ukukhumbula uMdali wethu Ozukileyo kuquka nokucingisisa ngezinto esimele simenzele zona. Xa sicingisisa ngezinto asenzele zona, siye sizimisele ngakumbi ukubonakalisa umbulelo esinawo kuye ngokuzibhokoxa ngamandla ethu ekumkhonzeni.—INtshu. 12:13.
AMATHUBA ASIVELELAYO XA SIBADALA
4. Nguwuphi umbuzo amele azibuze wona amaKristu asele enamava, yaye ngoba?
4 Ukuba sele umdala, umele uzibuze oku, ‘Ndiza kwenza ntoni ngobomi bam, okwangoku engekapheli ncam amandla am?’ Ekubeni ungumKristu onamava, uvulekelwe ngamathuba amaninzi abangenawo abanye. Unokudlulisela kwabatsha izinto oye wazifundiswa nguYehova. Unokomeleza abanye ngokubabalisela ngezinto oye wazinandipha ngoxa ukhonza uThixo. UKumkani uDavide wakuthandazela ukufumana amathuba okomeleza abanye. Wathi: “Owu Thixo, undifundise ukususela ebutsheni bam, . . . Owu Thixo, musa ukundishiya ndide ndibe mdala ndibe nezimvi. De ndixelele izizukulwana ngengalo yakho, kubo bonke abo baza kuza, ngamandla akho.”—INdu. 71:17, 18.
5. AmaKristu anamava anokuzidlulisela njani izinto azifundileyo kwabanye?
5 Ungakwazi njani ukudlulisela kwabanye ubulumko oye wabufumana ebomini? Ngaba akunakumema abakhonzi bakaThixo abaselula beze kwakho ukuze ubakhuthaze? Kutheni ungaceli ukuhamba nabo entsimini uze ubabonise indlela okunandipha ngayo ukukhonza uYehova? UElihu wamandulo wathi: “Mayithethe imihla, nobuninzi beminyaka bazise ubulumko.” (Yobhi 32:7) Umpostile uPawulos wabongoza abafazi abangamaKristu abasele bekhulile ukuba bakhuthaze abanye ngelizwi nangomzekelo. Wathi: “Abafazi abalupheleyo . . . mabafundise oko kulungileyo.”—Tito 2:3.
CINGA NGENDLELA ONOKUBANCEDA NGAYO ABANYE
6. Kutheni amaKristu asele enamava engamele azeye kwizinto anokuzenza?
6 Ukuba ungumKristu onamava, zininzi iindlela onokubanceda ngazo abanye. Cinga ngezinto osele uzazi ngoku, owawungazazi kwiminyaka eyi-30 neyi-40 edluleyo. Umele ukuba unobuchule bokusebenzisa imigaqo yeBhayibhile ebomini. Asithandabuzi ukuba sele ukwazi ukuchukumisa iintliziyo zabanye xa ubafundisa ngenyaniso yeBhayibhile. Ukuba ungumdala, uyakwazi ukunceda abazalwana abaqutyulwe sisiphoso. (Gal. 6:1) Mhlawumbi uye wafunda indlela yokongamela imicimbi yebandla, amasebe endibano, okanye ekwakhiweni kweeHolo zoBukumkani. Usenokuba uyayazi indlela yokukhuthaza oogqirha basebenzise iindlela zonyango ezingatofeli gazi. Kwanokuba usandul’ ukuba ngumKristu, unawo amava abalulekileyo ebomini. Ngokomzekelo, ukuba uye wakhulisa abantwana, bumele bube buninzi ubulumko oye wabuzuza. AmaKristu akhulileyo aluncedo gqitha ekufundiseni nasekukhuthazeni abantu bakaYehova ngokubafundisa, ukubakhokela nokubomeleza.—Funda uYobhi 12:12.
7. Luluphi uqeqesho oluluncedo olunokudluliselwa kwabaselula ngamaKristu akhulileyo?
7 Yintoni onokuyenza ukuze usebenzise ubuchule onabo ngakumbi? Usenokubonisa abaselula indlela yokuqalisa nokuqhuba izifundo zeBhayibhile. Ukuba ungudade, unokucebisa oomama abaselula ngendlela abanokuhlala ngayo bengamaKristu akhutheleyo ngoxa benyamekela iintsana zabo? Ukuba ungumzalwana, kutheni ungafundisi abazalwana abaselula indlela yokunikela iintetho ngehlombe nokuphucula indlela abashumayela ngayo? Zama ukubabonisa indlela yokukhuthaza abazalwana noodade abakhulileyo xa uye kubabona emizini yabo. Nakuba ungasenawo amandla obutsha, zininzi iindlela onokuqeqesha ngazo abaselula. ILizwi likaThixo lithi: “Ubuhle babafana ngamandla abo, yaye ubungangamsha bamadoda amadala zizimvi.”—IMize. 20:29.
UKUKHONZA KWIINDAWO EZIFUNA ABAVAKALISI ABANGAKUMBI
8. Yintoni awayenzayo uPawulos kamva kubomi bakhe?
8 Umpostile uPawulos wawaqongqotha amandla akhe okukhonza uThixo ngoxa wayesele emdala. Xa wayekhululwa entolongweni eRoma malunga nonyaka ka-61, wayesele enyamezele iminyaka enzima engumthunywa wevangeli ibe wayenokuhlala eRoma ukuze ashumayele apho. (2 Kor. 11:23-27) Akuthandabuzeki ukuba abazalwana beso sixeko sikhulu kangako babeluxabisa gqitha uncedo lwakhe. Kodwa, uPawulos wabona ukuba kwakusekho imfuneko engakumbi yabavakalisi kumazwe aphesheya kweelwandle. Wahamba noTimoti noTito, besiya kuhambo lobuthunywa bevangeli, baya e-Efese baza bajika baya eKrete, mhlawumbi naseMakedoni. (1 Tim. 1:3; Tito 1:5) Asazi enoba waya kusini na eSpeyin, awayezimisele ukuya kuso.—Roma 15:24, 28.
9. Yiyiphi indawo eyayifuna abashumayeli abangakumbi asenokuba waya kuyo uPetros? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
9 Umpostile uPetros umele ukuba wayesele engaphaya kweminyaka eyi-50 xa wayesiya kwiindawo ekwakufuneka abashumayeli abangakumbi kuzo. Kutheni sisitsho nje? Ukuba wayebulingana noYesu okanye emdala kunaye, umele ukuba wayemalunga neminyaka eyi-50 xa wayedibana nabanye abapostile eYerusalem ngonyaka ka-49. (IZe. 15:7) Ngaxa lithile emva kwaloo ntlanganiso, uPetros waya kuhlala eBhabhiloni, ngokuqinisekileyo esiya kushumayela kwezo ndawo zazinamaYuda amaninzi ahlala kuloo mmandla. (Gal. 2:9) Wayehlala apho xa wabhala incwadi yakhe ephefumlelweyo, malunga nonyaka ka-62. (1 Pet. 5:13) Kusenokuba nzima ukuhlala kwelinye ilizwe, kodwa uPetros akazange avumele ubudala bakhe bumyekise ukukhonza uYehova.
10, 11. Balisa amava omntu owafudukela kwindawo efuna abashumayeli abangakumbi ebudaleni bakhe.
10 Namhlanje, amaKristu amaninzi aneminyaka eyi-50 nangaphezulu afumanisa ukuba iimeko zawo ziye zatshintsha yaye angakwazi ukukhonza uYehova ngezinye iindlela. Amanye aye afudukela kwezo ndawo zifuna abashumayeli abangakumbi. Ngokomzekelo, uRobert wathi: “Xa sasineminyaka emalunga ne-55, sinomfazi wam saqonda ukuba ziseninzi izinto esinokukwazi ukuzenza. Unyana wethu ekuphela kwakhe wayesele ezihlalela, sasingenabazali kufuneka sibanyamekele kwabe kukho nelifa elincinane esasilishiyelwe. Ndabala iindleko ndaza ndabona ukuba xa sinokuthengisa indlu yethu sasiya kukwazi ukuyibhatala siyigqibe size sisalelwe bubugcwabalalana esasiya kuphila ngabo de ndifumane imali yomhlala-phantsi. Seva ukuba baliqela abantu abafuna ukufundelwa iBhayibhile eBolivia yaye zincinane iindleko zokuphila apho. Sagqiba ekubeni sifudukele apho. Zange kube lula ukuqhelana nobo bomi. Yonke into yayahlukile kwindlela esasiqhele ukuphila ngayo kuMntla Merika. Noko ke, asizange sizisole ngemigudu yethu.”
11 URobert wongezelela athi: “Ngoku ayisekho enye into esiyiphilelayo ngaphandle kokuxakeka yimisebenzi yebandla. Abanye abantu esasifunda nabo iBhayibhile babhaptizwa. Enye intsapho esasiyifundela iBhayibhile yayitsala nzima yabe ihlala mganyana kuthi. Kodwa veki nganye, ihamba loo mgama mde isiza kwiintlanganiso apha edolophini. Unokuyicingela indlela esavuya ngayo njengoko sibona inkqubela eyenzayo wabe nonyana wayo omdala esiba nguvulindlela othe ngxi!”
INTSWELO KWIINDAWO EZINABANTU ABATHETHA IILWIMI ZASEMZINI
12, 13. Balisa amava omKristu owaqalisa ukukhonza uYehova ngeendlela ezintsha xa kwafika ixesha lokudla umhlala-phantsi.
12 Amabandla namaqela athetha iilwimi zasemzini ancedakala gqitha yimizekelo yabazalwana noodade asele bekhulile. Le ntsimi kudla ngokuba mnandi ukushumayela kuyo. Ngokomzekelo, uBrian uthi: “Sinomfazi wam sasingazi ukuba senze ntoni xa kwafika ixesha lokuba ndidle umhlala-phantsi ndineminyaka eyi-65 eBritani. Abantwana bethu babesele bezihlalela, ibe kwakunzima ukufumana abantu abanomdla wokufundelwa iBhayibhile. Kwathi kusenjalo, ndadibana nendoda eliTshayina eyayisenza uphando kwiyunivesithi ekufuphi. Yavuma ukuza kwiintlanganiso zebandla, ibe ndaqalisa ukuyifundela iBhayibhile. Emva kweeveki ezimbalwa, yeza neTshayina lesibini esebenza nalo. Kwiiveki ezimbini kweza elesithathu nelesine.
13 “Kwathi xa ndicelwa liTshayina lesihlanu ukuba ndifunde nalo iBhayibhile, kwathi qatha into yokuba, ‘Ukuba neminyaka eyi-65 akuthethi kuthi ndimele ndithathe umhlala-phantsi nasekukhonzeni uYehova.’ Ndacela umfazi wam endimshiya ngeminyaka emibini ukuba sifunde isiTshayina. Saphulaphula isiTshayina esikwiikhasethi. Loo nto yenzeka kwiminyaka elishumi eyadlulayo. Ukushumayela kubantu abathetha ulwimi lwasemzini kuye kwasenza saziva siselula. Ukuza kuthi ga ngoku, siye safunda iBhayibhile namaTshayina ayi-112! Inkoliso yawo iye yeza kwiintlanganiso. Omnye kuwo unguvulindlela kunye nathi ngoku.”
Ungakwazi ukwandisa inkonzo yakho nasebudaleni bakho (Funda isiqendu 12, 13)
VUYISWA YINKONZO OKWAZIYO UKUYENZA
14. Yintoni anokuvuyiswa yiyo amaKristu akhulileyo, ibe akhuthazwa njani ngumzekelo kaPawulos?
14 Nakuba emaninzi amaKristu avulekelwa ngamathuba okwenza izinto ezintsha enkonzweni kaYehova xa eneminyaka eyi-50, akunjalo kuwo onke. Amanye kuwo akhathazwa yimpilo, ibe amanye anyamekela abazali abalupheleyo okanye abantwana abasaxhomekeke kuwo. Imele ikuvuyise into yokwazi ukuba uYehova uyixabisa gqitha yonke imigudu oyenzayo ukuze umkhonze. Ngoko ke, endaweni yokube ukhathazwa zizinto ongakwaziyo ukuzenza, vuyiswa zezo uzenzayo. Cinga nje ngomzekelo wompostile uPawulos. Kangangeminyaka wayeseluvalelweni, engakwazi kuqhubeka nomsebenzi wokuba ngumthunywa wevangeli. Kodwa wayesithi nanini na kufika abantu kuye, athethe nabo ngeZibhalo aze abomeleze ukholo.—IZe. 28:16, 30, 31.
15. Kutheni exatyiswa gqitha nje amaKristu alupheleyo?
15 UYehova uxabisa nayiphi na inkonzo eyenziwa ngabo sele baluphele gqitha. Nakuba uSolomon wabonisa ukuba kunzima gqitha ukukhonza uYehova ngemihla yentlekele nempilo enkenenkene, uYehova uyixabisa gqitha imigudu eyenziwa ngamaKristu alupheleyo ukuze amdumise. (Luka 21:2-4) Ibandla liyixabisa gqitha imizekelo yokuthembeka yezi nkonde neengwevukazi esele kukudala zikhonza uYehova.
16. Liliphi ilungelo ekubonakala ukuba laphoswa lilo ixhegwazana uAna, kodwa yintoni awayekwazi ukuyenza ukuze akhonze uThixo?
16 IBhayibhile isichazela ukuba ixhegwazana elinguAna laqhubeka likhonza uYehova nasekwaluphaleni. Lalingumhlolokazi oneminyaka eyi-84 ukuzalwa kukaYesu. Limele ukuba lafa lingekafumani thuba lokuba ngumlandeli kaYesu, apho laliya kubhaptizwa ngomoya oyingcwele okanye lishumayele iindaba ezilungileyo zoBukumkani. Kuyo yonke loo nto, uAna wayevuyiswa gqitha zizinto awayekwazi ukuzenza. ‘Zange aphoswe kukuba setempileni, enikela inkonzo engcwele ubusuku nemini.’ (Luka 2:36, 37) Njengokuba umbingeleli wayenyusa imibingelo etempileni kusasa nangokuhlwa, uAna wayeba phakathi kwezihlwele ezilapho kwintendelezo zithandaza zithe cwaka mhlawumbi kangangesiqingatha seyure. Xa wabona usana olunguYesu, waqalisa ‘ukuthetha ngaye lo mntwana kubo bonke abo babelindele intlangulo yeYerusalem.’—Luka 2:38.
17. Yintoni esinokuyenza ukuze sincede amaKristu alupheleyo akwazi ukuba nenxaxheba kunqulo lwenyaniso?
17 Namhlanje, simele singayilibali into yokunceda amaKristu alupheleyo okanye agulayo. Nakuba amanye enqwena ukubakho kwiintlanganiso zebandla neendibano, kusenokuba nzima ukwenjenjalo. Kwezinye iindawo, ngothando amabandla aye alungiselele ukuba abalupheleyo baphulaphule iintlanganiso ngefowuni. Kwezinye kusenokuba nzima ukwenza oku. Sekunjalo, amaKristu angakwaziyo ukubakho kwiintlanganiso anokukwazi ukuxhasa unqulo lwenyaniso. Ngokomzekelo, imithandazo yawo inegalelo kwimpumelelo yebandla lamaKristu.—Funda iNdumiso 92:13, 14.
18, 19. (a) Yintoni enokwenza amaKristu alupheleyo angayiqondi indlela alukhuthazo ngayo kwabanye? (b) Ngubani onokusisebenzisa esi siluleko sithi: “Khumbula uMdali wakho Ozukileyo”?
18 AmaKristu alupheleyo asenokungayiqondi indlela alukhuthazo ngayo kwabanye. Ngokomzekelo, nakuba uAna wayethembekile kuyo yonke loo minyaka wayesetempileni, umele ukuba akazange ayiqonde into yokuba nasemva kweenkulungwane umzekelo wakhe wawuseza kuqhubeka ukhuthaza abanye. Indlela uAna awayemthanda ngayo uYehova yade yabhalwa naseBhayibhileni. Akuthandabuzeki ukuba indlela omthanda ngayo uThixo iyaziwa ngamanye amaKristu. Yiloo nto iLizwi likaThixo lisithi: “Isithsaba sokuhomba zizimvi xa sifunyanwa endleleni yobulungisa.”—IMize. 16:31.
19 Sonke asikwazi kwenza yonke into esiyinqwenelayo ekukhonzeni uYehova. Kodwa abo basenamandla obutsha bamele bacingisise ngala mazwi: “Khumbula uMdali wakho Ozukileyo . . . ngaphambi kokuba ifike imihla yentlekele.”—INtshu. 12:1.